Isku day kale Prism haddii aan shaqayn
Ma badalo karaa ama cadaadin videos la Prism Video Converter? Halkan waxaad isku dayi kartaa kale Prism ah in ay si fudud u xaliyaan dhibaatadaada. Tani waxay kale oo ay Prism badasha videos at 30X ugu dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta iyo badalo videos la AAN tayada khasaaro.
Hel kale ah Prism xirfadeed iyo boosaska badan si aad video diinta.
Taageerada diinta 150+ videos, oo ay ka mid caadi ah, 3D iyo HD videos.
Cadaadi videos si aad u hesho video yar laakiin tayo isku mid sare.
Beddelaan videos in telefoonada, kiniiniga, iMovie, Final Cut Pro oo dheeraad ah.
Samee DVD xirfad by video gubanaya si DVD la arrimo menu.
Shakhsiyeeyo aad video iyada oo muuqaalada video tafatirka awood badan.
# 1 Sida loo Isticmaalo Kale Prism ah
# 2 More fursadaha: 100% Free Prism Alternative
# 1: Sida loo Isticmaalo Kale Prism ah
Tallaabada 1. Ku dar videos galay tan Prism Alternative
Waxaad si fudud u riixi kartaa batoonka "Faylal ay dar" on interface ah, ama jiitaa sii jeedi videos u galay. Its function diinta Dufcaddii ogolaanaysaa dajiyaan qoysas fara badan oo loogu badalo files waqti isku mid ah.
Edit video: goo, dalagga, darto saamaynta si aad video adigoo riixaya "Edit" button ku videos laga keeno.
Tallaabada 2. Set video saarka
Waxaad sameyn kartaa qaab wax soo saarka sida video (oo ay ku jiraan HD & 3D), audio, internetka, ama telefoonada Android iyo Apple, Madaxweyne Siilaanyo ama PSP. Just guji Qaabka Output, ka dibna dooran siday u kala horreeyaan hoos "Qaabka" iyo qaybaha "Device".
Tallaabada 3. DVD Gubashada (Ikhtiyaar)
Click ah "Guba" tab in ay galaan DVD ah interface gubanaya, ka dibna dajiyaan aad video files u galay, oo markaa ka dib codsi aad marto menu jecel in aad DVD shaqada adigoo gujinaya ah "Change Template" button. Ugu dambeyntii, waxaad riixi kartaa batoonka gubatay.
Tallaabada 4. badalo video
In tallaabadaas, kaliya aad ku dhacay kartaa "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan si loogu badalo videos. Tani waxay kale oo ay Prism badasha videos at 30X ugu dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta. Waxaad ka heli doontaa ugu dhakhsaha badan videos aad u sarifay.
# 2: fursado dheeraad ah: Free Prism Alternative
Hel BILAASH Prism kale oo dhameystiran
Free badalo wax video files xawaare degdeg ah.
Waraaqda music ka filimada.
Play talantigaagii in xaalkaa video Sidaad u jecel yahay.
Download YouTube videos in 2 siyaabo.
kaliya video caadi ah caadi video, HD video, video 3D
YouTube kaliya taageerin mid ah goobaha video qaybsiga caan ah oo ka soo dejisan
> Resource > bedelan karo > Prism Video Converter aan shaqaynayn? Isku day ay Alternative hadda